बिरोधका बाबजुद भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आज नेपाल आउँदै, यस्तो छ तयारी - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०९:१४ May 11, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौं, २८ बैसाख ।
नेपालीहरुको बिरोधका बाबजुद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै छन् । मोदी नयाँ दिल्लीबाट विहारको राजधानी पटना हुँदै भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकोप्टरबाट बिहान सवा १० बजे जनकपुर आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको बताईएको छ ।
जनकपुरमा उनले जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्नेछन् भने ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान बाह्रविघामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिक अभिनन्दनका नाममा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । विमानस्थलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत प्रदेशका मन्त्रीहरुले मोदीको स्वागत गर्ने बताईएको छ ।
त्यसपछि त्यहाँबाट मोदी जानकी मन्दिर पुगेर विशेष पूजाअर्चना गर्नेछन्, आज जानकी मन्दिरमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश रोक लगाइएको छ । पूजाअर्चनाको बेला एकसय एक साधुले एकैपटक शंखनाद गर्नेछन् । झण्डै ४५ मिनेट जानकी मन्दिरमा बिताउने मोदीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वागत गर्नेछन् भने दुवै प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता समेत हुने छ । त्यसक्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटको संयुक्त रुपमा उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौबाट जनकपुर पुग्ने प्रधानमन्त्री ओली जनकपुर चुरोट कारखानामा ओर्लेर समकक्षीलाई स्वागत गर्न त्यही समयमा पुग्नेछन् ।
जानकी मन्दिरमा पूजापछि मोदी ऐतिहासिक रंगभूमि मैदानमा पुग्नु हुनेछ । त्यहाँ जनकपुर उपमहानगरपलिकाका मेयर लालकिशोर साहले नागरिक अभिनन्दन गर्नेछन् । नेपाली भाषामा तयार अभिनन्दन पत्र मेयर साहले मैथिली भाषामा पढेर मैथिली भाषामा अभिनन्दन गर्ने जनकपुर उपमहानगरपालिकाको तयारी छ ।
स्वागत एवं अभिनन्दन समारोहमा मोदीलाई १ सय २१ किलोको फूलको माला पनि पहिराएर स्वागत गर्ने योजना छ । नागरिक अभिनन्दनपछि मोदीले समारोहलाई सम्बोधन गर्नु हुनेछ । मोदीको भ्रमणका कारण आज प्रदेश नं. २ मा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।
यता नागरिक अगुवा, बुद्दिजिबि र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित अधिकांश नेपालीहरुले नाकाबन्दीकर्ता मोदीलाई कुनैपनि अभिनन्दन गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आजै काठमाडौं आउने छन् । काठमाडौं आएपछि उनलाई टुंडिखेलमा गार्डअफ अनर प्रदान गर्ने तयारी छ । उनले आजै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । काठमाडौंमा ओलीर मोदीले स्वीच थिचेर ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना शिलान्यास गर्ने बताईएको छ । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना उद्घाटन नगर्न भनेको छ ।
मोदी भोलि काठमाडौंबाट मुक्तिनाथ जाने कार्यक्रम छ । मुक्तिनाथमा पूजा गरेपछि काठमाडौं फर्केर पशुपतिनाको मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्ने कार्यक्रम छ । भोलि नै उनले राजनीतिक भेटवार्ता गर्नेछन् भने काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उनलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने तयारी छ । भोलि दिउँसो ४ बजे मोदी भारतीय सेनाको विशेष विमानबाट नयाँ दिल्ली फर्किने छन् ।
भारतका कार्यकारी सरकार प्रमुखका रुपमा तेस्रो पटक हुन लागेको यो भ्रमण मोदीका लागि पनि तनावग्रस्त हुने देखिएको छ । किनभने अहिलेको अवस्थामा पुरै नेपाली मोदीबिरुद्ध खनिएका छन् । एमाले नेता-कार्यकर्ता र मधेसी नेता-कार्यकर्ताबाहेक सबै मोदीको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
प्रचण्डले अाफ्नै कथा सुनाउँदा मुटु छिया छिया हुन्छ भनेपछि
सिके राउतलाई छोडन आदेश, रेशम चौधरीलाई जन्मकैद, लक्ष्मण थारु रिहा
दिपक मनाङे चेकपोष्ट छलेर भित्रिएको सूचनापछि प्रहरी छ्याप्छ्याप्ती चारैतिर परिचालन
घरमै वम विष्फाेट भएपछि रक्षामन्त्री त्रसित हुँदै सेनाकाे गाडीभित्र पसे